Kugadzira Iyo Kesi yeiyo WordPress mune Bhizinesi: Pros uye Cons | Martech Zone
Kugadzira Iyo Kesi yeiyo WordPress mune Bhizinesi: Pros uye Cons
Chishanu, June 24, 2016 Chipiri, Mbudzi 24, 2020 Douglas Karr
WordPress.org iri kukura mubhizinesi, inoshandiswa kune ese makuru maindasitiri mazuva ano. Nehurombo, mabhizimusi makuru achiri kupfuura WordPress nekuda kwemukurumbira wayo sebhizinesi diki kana yakazvimirira blogging chikuva. Mumakore achangopfuura, yakatsaurirwa WordPress yakabata kuitisa mapuratifomu akashanduka. Isu takatamira ku Flywheel nokuti Martech Zone uye ndakafara nemhedzisiro yacho.
Kune zvayakanakira nezvayakaipira zvekushandisa WordPress mune Enterprise. Ini ndaifananidza iyo WordPress chiitiko nekumhanya. Une mota (WordPress), mutyairi (mudonzvo wako), injini yako (madingindira nemapulagini), uye nhangemutange yako (zvivakwa zvako). Kana chimwe chezvinhu izvi chikashaikwa, unorasikirwa nhangemutange. Isu takatarisa makambani makuru mazhinji achitadza neWordPress kutama uye kupomera WordPress; zvisinei, hatina kumboona nyaya chaiyo iri WordPress.
Zvakanakira WordPress zve Enterprise
kudzidza - Kana iwe uchida chero rubatsiro, WordPress.org ine toni yezviwanikwa, Youtube ine toni yemavhidhiyo, kune zvirongwa zvekudzidzisa mukati mewebhu, uye Google inoguma nemamiriyoni ezvinyorwa. Tisingatauri zvedu WordPress articles, Ehe saizvozvo.
Kudekara Use - Kunyange zvingave zvisiri nyore pakutanga pakuita zvigadziriso, zvekugadzira zvemukati WordPress iri snap. Mupepeti wavo akasimba zvisingaite (kunyange zvichindinetsa kuti h1, h2, uye h3 misoro nemisoro midiki haisati yaita mukodhi).
Kuwana zviwanikwa - Kutsvaga zvimwe zvekuvandudza CMS zviwanikwa kunogona kunge kuri kunetsa, asi neWordPress vari kwese kwese. Yambiro: Izvo zvinogona zvakare kuva dambudziko… kune vazhinji vavandudzi uye vamiririri vanogadzira mhinduro dzakashata kwazvo kunze uko kweiyo WordPress.
Kubatanidzwa - Kana iwe uri kuyedza kuwedzera mafomu kana kusanganisa chero chinhu, iwe unowanzo tsvaga inogadzirwa kubatanidzwa muWordPress kutanga. Tsvaga iyo mvumo plugin dhairekitori kana saiti senge Code Canyon, hapana zvakawanda zvausingawani!
Customization - WordPress 'madingindira, plugins, majeti, uye echinyakare posvo mhando dzinopa risingaperi huwandu hwekuchinja. WordPress inoshanda nesimba kuve ne akateedzana emaAPIs iyo inosanganisira zvese zvinoitwa pachikuva.
Iyo Cons yeiyo WordPress ye Enterprise
Optimization - WordPress iri kugona kunze kwebhokisi kana zvasvika pakutsvaga injini yekugadzirisa, asi haina kunaka. Ivo vachangobva kuwedzera sitemaps kune avo Jetpack plugin, asi haina kusimba se Yoast's SEO plugins.
mutambo - WordPress haina dhatabhesi optimization uye peji caching, asi iwe unogona nyore kuita izvi nekushandisa Yakagadziriswa WordPress Host. Ini ndaizoda chero mhinduro kuti ive nema automated backups, peji caching, dhatabhesi maturusi, kukanganisa matanda uye kugona kuona kuti ubudirire.
Internationalization (I18N) - WordPress zvinyorwa maitirwo epasi rose madingindira ako nema plugins, asi inoshaya mukana wekubatanidza zvemukati zvemukati kune system. Isu takaita WPML zve izvi uye akabudirira.
chibatiso - Paunenge uchipa simba 25% yewebhu, iwe uri chakanangwa chakakura chekubira. Zvekare, kumwe kwekuchengetedzwa kwekutambira kunopa otomatiki plugin uye zvinyorwa zvinyorwa kana nyaya dzekuchengetedza dzikamuka. Ndinokurudzira zvikuru kuvaka madingindira evana kuti iwe ugone kuenderera nekuvandudza yako yakatsigirwa theme yemubereki kuti urege kuisa saiti yako panjodzi neti theme isingagadziriswe.
Code Base - Themes dzinowanzo gadzirirwa dhizaini hombe, asi inoshaya kuvandudzwa kwekumhanyisa, kugadzirisa, uye kugadzirisa. Zvinogona kunge zvichinyanyisa kuwedzera kuti zvisina kunaka sei mapulagi nematimu anovandudzwa. Isu tinowanzozviwana tichinyorazve mashandiro mumatimu (chimwe chikonzero chekushandisa madingindira evana).
Backups - WordPress inopa mhinduro yakabhadharwa, VaultPress yezvekuchengetedza mabhaisikopo asi ini ndinoshamiswa nemakambani mangani asingazive kuti hachisi chinhu chinobuda mubhokisi uye chinoda kupihwa newaunotambira kana imwe sevhisi.
WordPress irikugadzira nhanho nemabhizimusi epakati nepakakura, heano mamwe matanho kubva Pantheon.
Tags: Enterprisebhizinesi wordpressWordPresswordpress conswordpress zvayakanakirawordpress zvayakanakira nezvayakaipira
Pantheon: Yakakomba WordPress kana Drupal Kubata neNew Relic